အောင်ကြောင်းဝေဖြာ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာယတြာ - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
Posted on April 15, 2017 by Bay Din War Tanar Oh
တစ်နှစ်ကူးပြန်ပြီ။ အတွေးသစ် အမြင်သစ်တွေ
စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရပေတော့မည်။ အတိတ်ပြန်ကြည့်ပြီး အမှားတွေပြင်ဆင်ရပေတော့မည်။
အနာဂတ်အတွက် Targetသစ်တွေချမှတ်ကြရမည်။ အကုသိုလ်အလုပ်တွေကို လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပြီး
အလွန်မင်္ဂလာရှိလှသော နှစ်ဦးသို့ရောက်ရှိပါတော့မည်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့အထွတ်အမြတ်ထားရာ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသော နှစ်ဦးနှစ်ဆန်းသို့ကူးပြောင်းတော့မည့်ကာလသမယဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ဟောင်းနှင့်အတူအတွေးအခေါ်ဟောင်းအယူအဆဟောင်းတို့ကို ဖြတ်ကျော်ကြပေတော့မည်။အမြင်ဟောင်း အတွေးဟောင်းအယူအဆဟောင်းတို့နှင့်
ပက်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေဖန်ရင်း သုံးသပ်ရင်းမလိုအပ်သည်များကို ထားရစ်ခဲ့ရပေတော့မည်။
၊မသိခဲ့၍ ကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုခဲ့သည်ဖြစ်စေ၊ သိခြင်းနှင့်မသိခြင်းတို့၏ စပ်ကူးမပ်ကူးကာလတွင်အကြောင်းမညီညွတ်ခဲ့ဖြစ်စေ နှစ်ဟောင်းတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရတော့မည်ဖြစ်၏။
မင်္ဂလာဟူသည် မကောင်းမှုကိုပယ်ဖျက်၍ ကောင်းမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းပင်ဖြစ်ရာ မကောင်းမှုကိုပယ်ဖျက်တတ်သောသဘောသည် မင်္ဂလာမည်သကဲ့သို့ ကြီးပွားချမ်းသားခြင်း၏ အကြောင်းကိုဖြစ်စေသောသလောသည်လည်းမင်္ဂလာမည်ပါပေ၏။
မင်္ဂလာရှိရှိကြုံတွေ့ရတော့မည့် အနာဂတ်ဘဝခရီးအတွက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏ဒေသနာတော်နှင့်အညီ ကာယကံမကောင်းမှု ၊ဝစီကံမကောင်းမှု ၊မနောကံမကောင်းမှု မှန်သမျှတို့ကိုဖယ်ရှားပြီး
ကာယကံကောင်းမှု ၊ဝစီကံကောင်းမှု ၊မနောကံကောင်းမှု တို့ကိုတည်ဆောက်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ကြရပေတော့မည်။
မေတ္တာ ၊ဂရုဏာ ၊မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာ တရားတို့ကို
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောမင်္ဂလာတရားတော်တွင် ပူဇာစ ပူဇနေယျာနံဟူသော ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်းနှင့် ဂါရတောစနိဝါတောစတည်းဟူသော ရိုသေထိုက်သူကို ရိုသေခြင်း မင်္ဂလာတို့ရှိ၏ ။
ထိုမင်္ဂလာတရားတော်တို့နှင့်အညီ ကံဆိုး ၊ ကြမ္မာဆိုး ဂြိုဟ်​စီးဂြိုဟ်​နင်းဆိုးတို့မှ လွတ်​​မြောက်​ပြီးသကာလ –
တစ်​နှစ်​တွင်​တစ်​ကြိမ်​ သာစီရင်​ခွင့်​ရသည့်​​ ​အောင်​​ကြောင်းဖြာ ​အောင်​ရာနိမိတ်ေ​အာင်​ဟိတ်​တို့ဖြင့်​ ပြည့်​စုံလာ​စေနို​င်​​သော နှစ်​ဦးမဂ်​လာယတြာကြီးများဖြင့်​ ​​​ကုသိုလ်ပြုလိုက်ရပေသည်။
ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာနှင့် ပါတ်သက်၍ ရှေးမြန်မာ မင်းများသည် အရေးအကြောင်း ကြီးငယ် ရှိသော အခါတို့၌ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ယတြာဟူ၍ ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြ၏။ မြို့တည် နန်းတည် သောအခါများ ၊ စစ်ထွက်သော အခါများ၌ အထူးသဖြင့် ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြလေ၏။ ဇာတာသန့်သည်ဟုလည်း ခေါ်လေ၏။
ဘုရင်မင်းမြတ် များသာမက တိုင်းသူပြည်သားများသည်လည်း အဆိုပါ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာ ယတြာကို ဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြလေ၏။ မြန်မာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ များတွင် တစ်နှစ်တာလုံးအတွက် ကံအညံ့ အခိုက်များ ကင်းစင် ပြေပျောက်ကာ ကျက်သရေ မင်္ဂလာ အောင်ခြင်း အဖြာဖြာ တိုးပွားစေခြင်းငှာ ခေါင်းဆေး မင်္ဂလာယတြာကို ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြလေ၏။
ရာထူးတက်ရန် ရန်အပြိုင်အဆိုင် များနေ၍ အောင်နိုင်လိုသောအခါ လာဘ်လာဘများ ပိတ်ဆို့သော အခါ ဒုက္ခ အခက်အခဲများ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ကြံနေရသော အခါ စသည် စသည် တို့၌လည်း ခေါင်းဆေး မင်္ဂလာ ယတြာကို ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြလေ၏။ ထို့ကြောင့် နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် နောင် ရောက်လာမည့် နှစ်တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း ကံဇာတာ အညံ့အခိုက်များ ကင်းစင်ပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်း တိုးတက်ခြင်းကို အလိုရှိကြကုန်သော မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့အတွက် နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင်အဖြစ် တင်ပေးလိုက်ရပါသည်။
အနောက်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် ရွက်လှ(၄)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ဆီးညွန့်(၃)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ မေမြို့(၅)ပွင့်၊ ကံ့ကော်(၂)ညွန့်၊ သပြေ(၆)ညွန့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး အနောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို တောင်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၆)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၆)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
မြောက်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် မြေစာ(၅)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ရွက်လှ(၄)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ သပြေ(၆)ညွန့်၊ စံပယ်(၃)ကုံး၊ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး မြောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို အနောက်တောင်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၁၅)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၁၅)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
အနောက်တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် သရက်(၆)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် မြေစာ(၅)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊ ရွက်လှ(၄)ညွန့်၊ အုန်း(၁)ညွန့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး အနောက်တောင်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို အနောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၈)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၈)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
အရှေ့မြောက်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် ဒန်း(၇)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် သရက်(၆)ညွန့် ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ အုန်း(၁)ညွန့်၊ ကံ့ကော်(၂)ညွန့်၊ မေမြို့ပန်း(၅)ပွင့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့်တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး အရှေ့မြောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို အနောက်မြောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၁၇)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၁၇)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။ –
အရှေ့အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် အုန်း(၁)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ဒန်း(၇)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ ကံ့ကော်(၂)ညွန့်၊ သပြေ(၆)ညွန့်၊ စံပယ်(၃)ကုံးကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး အရှေ့အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို အရှေ့မြောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၁၉)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၁၉)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
အရှေ့တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် ကံ့ကော်(၂)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် အုန်း (၁)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ စံပယ်(၃)ကုံး၊ နှင်းဆီ(၇)ပွင့်၊ ရွက်လှ(၄)ညွန့်ကို ထည့် ပြီး အမြင့်တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး အရှေ့တောင်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို အရှေ့တောင်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၂၁)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၂၁)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
တောင်အရပ်သို့ မျက်နှာမူ၍ ညာခြေဖြင့် ဆီး(၃)ညွန့်၊ ဘယ်ခြေဖြင့် ကံ့ကော်(၂)ညွန့်ကို နင်းထားပါ။ အနီးတွင် ကလပ်(သို့မဟုတ်) လင်ပန်းထဲ၌ ရွက်လှ(၄)ညွန့်၊ အုန်း(၁)ညွန့်၊ မေမြို့(၅)ပွင့်ကို ထည့်ပြီး အမြင့် တစ်နေရာမှာ တင်ထားပါ။ တရော်ကင်ပွန်းဖြင့် ခေါင်းလျှော်ပြီးနောက် ရေဆေးချပြီးလျှင် ရေသန့်သွားသောအခါ ဆံပင်မှ ထိုရေတို့ကို လင်ပန်းထဲမှ ပန်းများပေါ်သို့ ညှစ်ချရင်း ကံဇာတာထွန်းပရန် ဆုတောင်းပါ။ ခြေဖြင့်နင်းခဲ့သောပန်းများကို အခြား တစ်ယောက်ကယူပြီး တောင်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါ။ မိမိကမူ လင်ပန်းထဲမှပန်းများကို မြောက်အရပ်သို့သွား၍ စွန့်ပါလေ။ ပြီးနောက် အ၀တ်အစားလဲလှယ်ကာ မြတ်စွာဘုရားတွင် အမွှေးတိုင်(၁၀)တိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်(၁၀)တိုင် လှူဒါန်းပြီး ကံဇာတာ ပွင့်လန်းရန် ဆုတောင်းရပါမည်။
၁၃၇၉ ခု၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ရန် မင်္ဂလာအခါနာရီ
၁၃၇၉ ခု၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်၊ ၁၇-၄-၂၀၁၇ ရက်တွင် အတိတ်ကောင်းနိမိတ်ကောင်းယူ၍ ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလိုကြကုန်သော ခုနစ်ရက်သားသမီးအပေါင်းတို့အနေနှင့် ဖော်ပြထားသည့် အစီအစဉ်များ အတိုင်း နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ နံနက်စောစောတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါသည်။ အချိန်နာရီ အတိအကျ ဆောင်ရွက်လိုပါသော် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
တနင်္ဂနွေသားသမီးများသည် နံနက် ၇း၃၀ နာရီ မှ ၉ နာရီအတွင်း၊
(သို့မဟုတ်) ၁၀း၃၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအတွင်း။
တနင်္လာသားသမီးများသည် နံနက် ၉ နာရီ မှ ၁၀း၃၀ နာရီအတွင်း၊
အင်္ဂါသားသမီးများသည် နံနက် ၆ နာရီ မှ ၇း၃၀ နာရီအတွင်း၊
(သို့မဟုတ်) နံနက် ၉ နာရီ မှ ၁၀း၃၀ နာရီအတွင်း၊
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် နံနက် ၇း၃၀ နာရီ မှ ၉ နာရီအတွင်း၊(သို့မဟုတ်) နံနက် ၁၀း၃၀ နာရီ မှ ၁၂ နာရီအတွင်း
ကြာသပတေးသားသမီးများသည် နံနက် ၇း၃၀ နာရီ မှ ၉ နာရီအတွင်း၊
သောကြာသားသမီးများသည် နံနက် ၆ နာရီ မှ ၇း၃၀ နာရီအတွင်း၊
စနေသားသမီးများသည် နံနက် ၆ နာရီ မှ ၇း၃၀ နာရီအတွင်း၊
ခေါင်းဆေးမင်္ဂလာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကြုံလာရမည့်အညံ့အဆိုးများ ၊ ပြဿ နာအမှုအခင်းများ ကင်းဝေးပြီး ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာတွေ ကျရောက်လာတော့မည်လို့ပြောကြားရင်း …….
တဈနှဈကူးပွနျပွီ။ အတှေးသဈ အမွငျသဈတှေ
စိတျကူးသဈတှနေဲ့ရှဆေ့ကျရပတေော့မညျ။ အတိတျပွနျကွညျ့ပွီး အမှားတှပွေငျဆငျရပတေော့မညျ။
အနာဂတျအတှကျ Targetသဈတှခေမြှတျကွရမညျ။ အကုသိုလျအလုပျတှကေို လုံးဝရှောငျကွဉျပွီး
အလှနျမင်ျဂလာရှိလှသော နှဈဦးသို့ရောကျရှိပါတော့မညျ။ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျသူတျောစငျတို့အထှတျအမွတျထားရာ မင်ျဂလာအပေါငျးနှငျ့ပွညျ့စုံသော နှဈဦးနှဈဆနျးသို့ကူးပွောငျးတော့မညျ့ကာလသမယဖွဈပါသညျ။
နှဈဟောငျးနှငျ့အတူအတှေးအချေါဟောငျးအယူအဆဟောငျးတို့ကို ဖွတျကြျောကွပတေော့မညျ။အမွငျဟောငျး အတှေးဟောငျးအယူအဆဟောငျးတို့နှငျ့
ပကျသကျ၍ ကိုယျ့ကိုယျကို ဝဖေနျရငျး သုံးသပျရငျးမလိုအပျသညျမြားကို ထားရဈခဲ့ရပတေော့မညျ။
၊မသိခဲ့၍ ကောငျးမှုမကောငျးမှုပွုခဲ့သညျဖွဈစေ၊ သိခွငျးနှငျ့မသိခွငျးတို့၏ စပျကူးမပျကူးကာလတှငျအကွောငျးမညီညှတျခဲ့ဖွဈစေ နှဈဟောငျးတှငျကနျြရဈခဲ့ရတော့မညျဖွဈ၏။
မင်ျဂလာဟူသညျ မကောငျးမှုကိုပယျဖကျြ၍ ကောငျးမှုကိုတညျဆောကျခွငျးပငျဖွဈရာ မကောငျးမှုကိုပယျဖကျြတတျသောသဘောသညျ မင်ျဂလာမညျသကဲ့သို့ ကွီးပှားခမျြးသားခွငျး၏ အကွောငျးကိုဖွဈစသေောသလောသညျလညျးမင်ျဂလာမညျပါပေ၏။
မင်ျဂလာရှိရှိကွုံတှရေ့တော့မညျ့ အနာဂတျဘဝခရီးအတှကျ ဗုဒ်ဓရှငျတျောမွတျဘုရား၏ဒသေနာတျောနှငျ့အညီ ကာယကံမကောငျးမှု ၊ဝစီကံမကောငျးမှု ၊မနောကံမကောငျးမှု မှနျသမြှတို့ကိုဖယျရှားပွီး
ကာယကံကောငျးမှု ၊ဝစီကံကောငျးမှု ၊မနောကံကောငျးမှု တို့ကိုတညျဆောကျကငျြ့ကွံပှားမြားအားထုတျကွရပတေော့မညျ။
မတ်ေတာ ၊ဂရုဏာ ၊မုဒိတာ၊ ဥပက်ေခာ တရားတို့ကို
ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျဟောကွားတျောမူခဲ့သောမင်ျဂလာတရားတျောတှငျ ပူဇာစ ပူဇနယြောနံဟူသော ပူဇျောထိုကျသူကို ပူဇျောခွငျးနှငျ့ ဂါရတောစနိဝါတောစတညျးဟူသော ရိုသထေိုကျသူကို ရိုသခွေငျး မင်ျဂလာတို့ရှိ၏ ။
ထိုမင်ျဂလာတရားတျောတို့နှငျ့အညီ ကံဆိုး ၊ ကွမ်မာဆိုး ဂွိုဟျ​စီးဂွိုဟျ​နငျးဆိုးတို့မှ လှတျ​​မွောကျ​ပွီးသကာလ –
တဈ​နှဈ​တှငျ​တဈ​ကွိမျ​ သာစီရငျ​ခှငျ့​ရသညျ့​​ ​အောငျ​​ကွောငျးဖွာ ​အောငျ​ရာနိမိတျေ​အာငျ​ဟိတျ​တို့ဖွငျ့​ ပွညျ့​စုံလာ​စနျေို​ငျ​​သော နှဈ​ဦးမဂျ​လာယတွာကွီးမြားဖွငျ့​ ​​​ကုသိုလျပွုလိုကျရပသေညျ။
ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာနှငျ့ ပါတျသကျ၍ ရှေးမွနျမာ မငျးမြားသညျ အရေးအကွောငျး ကွီးငယျ ရှိသော အခါတို့၌ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ယတွာဟူ၍ ဆောငျရှကျလေ့ ရှိကွ၏။ မွို့တညျ နနျးတညျ သောအခါမြား ၊ စဈထှကျသော အခါမြား၌ အထူးသဖွငျ့ ဆောငျရှကျလေ့ ရှိကွလေ၏။ ဇာတာသနျ့သညျဟုလညျး ချေါလေ၏။
ဘုရငျမငျးမွတျ မြားသာမက တိုငျးသူပွညျသားမြားသညျလညျး အဆိုပါ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာ ယတွာကို ဆောငျရှကျလရှေိ့ကွလေ၏။ မွနျမာ နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ မြားတှငျ တဈနှဈတာလုံးအတှကျ ကံအညံ့ အခိုကျမြား ကငျးစငျ ပွပြေောကျကာ ကကျြသရေ မင်ျဂလာ အောငျခွငျး အဖွာဖွာ တိုးပှားစခွေငျးငှာ ခေါငျးဆေး မင်ျဂလာယတွာကို ဆောငျရှကျလေ့ ရှိကွလေ၏။
ရာထူးတကျရနျ ရနျအပွိုငျအဆိုငျ မြားနေ၍ အောငျနိုငျလိုသောအခါ လာဘျလာဘမြား ပိတျဆို့သော အခါ ဒုက်ခ အခကျအခဲမြား တဈခုပွီးတဈခု ကွံနရေသော အခါ စသညျ စသညျ တို့၌လညျး ခေါငျးဆေး မင်ျဂလာ ယတွာကို ဆောငျရှကျလေ့ ရှိကွလေ၏။ ထို့ကွောငျ့ နှဈသဈကူး ကာလတှငျ နောငျ ရောကျလာမညျ့ နှဈတဈနှဈတာ ကာလအတှငျး ကံဇာတာ အညံ့အခိုကျမြား ကငျးစငျပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျး တိုးတကျခွငျးကို အလိုရှိကွကုနျသော မိတျဆှအေပေါငျးတို့အတှကျ နှဈသဈကူး လကျဆောငျအဖွဈ တငျပေးလိုကျရပါသညျ။
အနောကျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ဆီးညှနျ့(၃)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ မမွေို့(၅)ပှငျ့၊ ကံ့ကျော(၂)ညှနျ့၊ သပွေ(၆)ညှနျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး အနောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို တောငျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၆)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၆)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
မွောကျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ မွစော(၅)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ သပွေ(၆)ညှနျ့၊ စံပယျ(၃)ကုံး၊ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး မွောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို အနောကျတောငျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၁၅)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၁၅)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
အနောကျတောငျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ သရကျ(၆)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ မွစော(၅)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့၊ အုနျး(၁)ညှနျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး အနောကျတောငျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို အနောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၈)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၈)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
အရှမွေ့ောကျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ ဒနျး(၇)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ သရကျ(၆)ညှနျ့ ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ အုနျး(၁)ညှနျ့၊ ကံ့ကျော(၂)ညှနျ့၊ မမွေို့ပနျး(၅)ပှငျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး အရှမွေ့ောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို အနောကျမွောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၁၇)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၁၇)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။ –
အရှအေ့ရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ အုနျး(၁)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ဒနျး(၇)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ ကံ့ကျော(၂)ညှနျ့၊ သပွေ(၆)ညှနျ့၊ စံပယျ(၃)ကုံးကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး အရှအေ့ရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို အရှမွေ့ောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၁၉)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၁၉)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
အရှတေ့ောငျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ ကံ့ကျော(၂)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ အုနျး (၁)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ စံပယျ(၃)ကုံး၊ နှငျးဆီ(၇)ပှငျ့၊ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့ကို ထညျ့ ပွီး အမွငျ့တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး အရှတေ့ောငျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို အရှတေ့ောငျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၂၁)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၂၁)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
တောငျအရပျသို့ မကျြနှာမူ၍ ညာခွဖွေငျ့ ဆီး(၃)ညှနျ့၊ ဘယျခွဖွေငျ့ ကံ့ကျော(၂)ညှနျ့ကို နငျးထားပါ။ အနီးတှငျ ကလပျ(သို့မဟုတျ) လငျပနျးထဲ၌ ရှကျလှ(၄)ညှနျ့၊ အုနျး(၁)ညှနျ့၊ မမွေို့(၅)ပှငျ့ကို ထညျ့ပွီး အမွငျ့ တဈနရောမှာ တငျထားပါ။ တရျောကငျပှနျးဖွငျ့ ခေါငျးလြှျောပွီးနောကျ ရဆေေးခပြွီးလြှငျ ရသေနျ့သှားသောအခါ ဆံပငျမှ ထိုရတေို့ကို လငျပနျးထဲမှ ပနျးမြားပျေါသို့ ညှဈခရြငျး ကံဇာတာထှနျးပရနျ ဆုတောငျးပါ။ ခွဖွေငျ့နငျးခဲ့သောပနျးမြားကို အခွား တဈယောကျကယူပွီး တောငျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါ။ မိမိကမူ လငျပနျးထဲမှပနျးမြားကို မွောကျအရပျသို့သှား၍ စှနျ့ပါလေ။ ပွီးနောကျ အဝတျအစားလဲလှယျကာ မွတျစှာဘုရားတှငျ အမှေးတိုငျ(၁၀)တိုငျ၊ ဖယောငျးတိုငျ(၁၀)တိုငျ လှူဒါနျးပွီး ကံဇာတာ ပှငျ့လနျးရနျ ဆုတောငျးရပါမညျ။
၁၃၇၉ ခု၊ မွနျမာနှဈဆနျးတဈရကျနေ့ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာပွုလုပျရနျ မင်ျဂလာအခါနာရီ
၁၃၇၉ ခု၊ မွနျမာနှဈဆနျးတဈရကျ၊ ၁၇-၄-၂၀၁ရ ရကျတှငျ အတိတျကောငျးနိမိတျကောငျးယူ၍ ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာပွုလိုကွကုနျသော ခုနဈရကျသားသမီးအပေါငျးတို့အနနှေငျ့ ဖျောပွထားသညျ့ အစီအစဉျမြား အတိုငျး နှဈဆနျးတဈရကျနေ့ နံနကျစောစောတှငျ ဆောငျရှကျနိုငျကွပါသညျ။ အခြိနျနာရီ အတိအကြ ဆောငျရှကျလိုပါသျော အောကျပါအတိုငျး ဆောငျရှကျနိုငျပါသညျ။
တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားသညျ နံနကျ ရး၃၀ နာရီ မှ ၉ နာရီအတှငျး၊
(သို့မဟုတျ) ၁၀း၃၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီအတှငျး။
တနင်ျလာသားသမီးမြားသညျ နံနကျ ၉ နာရီ မှ ၁၀း၃၀ နာရီအတှငျး၊
အင်ျဂါသားသမီးမြားသညျ နံနကျ ၆ နာရီ မှ ရး၃၀ နာရီအတှငျး၊
(သို့မဟုတျ) နံနကျ ၉ နာရီ မှ ၁၀း၃၀ နာရီအတှငျး၊
ဗုဒ်ဓဟူးသားသမီးမြားသညျ နံနကျ ရး၃၀ နာရီ မှ ၉ နာရီအတှငျး၊(သို့မဟုတျ) နံနကျ ၁၀း၃၀ နာရီ မှ ၁၂ နာရီအတှငျး
ကွာသပတေးသားသမီးမြားသညျ နံနကျ ရး၃၀ နာရီ မှ ၉ နာရီအတှငျး၊
သောကွာသားသမီးမြားသညျ နံနကျ ၆ နာရီ မှ ရး၃၀ နာရီအတှငျး၊
စနသေားသမီးမြားသညျ နံနကျ ၆ နာရီ မှ ရး၃၀ နာရီအတှငျး၊
ခေါငျးဆေးမင်ျဂလာပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ တဈနှဈပတျလုံး ကွုံလာရမညျ့အညံ့အဆိုးမြား ၊ ပွဿ နာအမှုအခငျးမြား ကငျးဝေးပွီး ကောငျးကြိုးမင်ျဂလာတှေ ကရြောကျလာတော့မညျလို့ပွောကွားရငျး …….
Previous PostPrevious သင်္ကြန် အလှပုံလေးများ
Next PostNext မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် (၁)နှစ်စာ ဟောစာတမ်းကြီး